December 2017 – myanmar news
၁။ အမျက်ဒေါသ ကြီးသောသူကို မိမိက အမျက်မထား မေတ္တာပွါးသဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၂။ မိမိအပေါ် မကောင်းသောသူကို (ကောက်ကျစ် ယုတ်မာသောသူကို မိမိက စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း ထားခြင်းဖြင့် (အမှန်တရား လက်ကိုင် ထားခြင်းဖြင့်) အနိုင်ယူပါ။
၃။ ကပ်စေးနဲသော သူကို (မိမိဥစ္စာပစ္စည်း အပေါ်၌ ၀န်တိုနှမြော စေးနဲသောသူကို) မိမိက ကျွေးမွေးလှူဒါန်း ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၄။ မိမိအပေါ် လိမ်လည်လှည့်ဖြား မုသားစကားပြောတတ်သော သူကို မိမိက အမှန်တရား သစ္စာစကား ပြောကြားခြင်း- ပြောဆိုခြင်းဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
၁။ အမကျြဒေါသ ကွီးသောသူကို မိမိက အမကျြမထား မတ်ေတာပှါးသဖွငျ့ အနိုငျယူပါ။
၂။ မိမိအပျေါ မကောငျးသောသူကို (ကောကျကဈြ ယုတျမာသောသူကို မိမိက စိတျကောငျးနှလုံးကောငျး ထားခွငျးဖွငျ့ (အမှနျတရား လကျကိုငျ ထားခွငျးဖွငျ့) အနိုငျယူပါ။
၃။ ကပျစေးနဲသော သူကို (မိမိဥစ်စာပစ်စညျး အပျေါ၌ ၀နျတိုနှမွော စေးနဲသောသူကို) မိမိက ကြှေးမှေးလှူဒါနျး ပေးကမျးစှနျ့ကွဲခွငျးဖွငျ့ အနိုငျယူပါ။
၄။ မိမိအပျေါ လိမျလညျလှညျ့ဖွား မုသားစကားပွောတတျသော သူကို မိမိက အမှနျတရား သစ်စာစကား ပွောကွားခွငျး- ပွောဆိုခွငျးဖွငျ့ အနိုငျယူပါ။
Author admin 1Posted on December 30, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on အနိုင်ယူနည်း(၄) မျိုး
Author admin 1Posted on December 30, 2017 December 30, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​”မြန်မာနိုင်ငံမှ”ကမ္ဘာကျော်ထင်ရှားခဲ့သူများ”
​ရှက်တတ်ရင် ဒီစာကို ဆက်မဖတ်နဲ့…
Facebook ဆိုတာကို ထွင်ပေးလိုက်တယ်
ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆီမှာ ဒီနေ့အထိ
ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ဖြစ်ကုန်တယ်
ချမ်းသာဖို့ဝေးစွ ချောင်လည်ဖို့တောင် အနိုင်နိုင်…
တစ်နေ့တစ်နေ့ ဖုန်းကို လက်ညှိုးနဲ့ ပွတ်လိုက်
လက်မနဲ့ဖိလိုက်၊ ပွတ်ဆွဲလိုက်၊ နှိပ်ထည့်လိုက်
ချေးပါလည်း ဒါပဲ သေးပေါက်လည်း ဒါပဲ
မိုးလင်းလည်း ဒါပဲ မိုးချုပ်လည်း ဒါပဲ…
G 20 မသိ
ပြောပြန်ရင်လည်း ပြောတဲ့သူ အလွန်
တစ်နှစ် တစ်တန်းအောင်ရုံနဲ့ မရဘူးဗျ
မှန်သလား မှားသလား မသိ
တရားသလား မတရားသလား မသိ
သာသလား နာသလား မသိ
ထူသလား ပါးသလား မသိ
ချိုသလား ခါးသလား မသိ
သင့်သလား မသင့်သလား မသိ
တော်သလား ညံ့သလား မသိ
မသိ မသိ မသိ
ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလူတွေနဲ့
ဒီခရီးကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆက်ကြမလဲဆိုတာ
Credit to Wai Phyo
ရှကျတတျရငျ ဒီစာကို ဆကျမဖတျနဲ့…
Facebook ဆိုတာကို ထှငျပေးလိုကျတယျ
ဒါပမေဲ့ သူတို့ဆီမှာ ဒီနအေ့ထိ
ကွကျပြောကျ ငှကျပြောကျ ဖွဈကုနျတယျ
ခမျြးသာဖို့ဝေးစှ ခြောငျလညျဖို့တောငျ အနိုငျနိုငျ…
တဈနတေ့ဈနေ့ ဖုနျးကို လကျညှိုးနဲ့ ပှတျလိုကျ
လကျမနဲ့ဖိလိုကျ၊ ပှတျဆှဲလိုကျ၊ နှိပျထညျ့လိုကျ
ခြေးပါလညျး ဒါပဲ သေးပေါကျလညျး ဒါပဲ
မိုးလငျးလညျး ဒါပဲ မိုးခြုပျလညျး ဒါပဲ…
ပွောပွနျရငျလညျး ပွောတဲ့သူ အလှနျ
တဈနှဈ တဈတနျးအောငျရုံနဲ့ မရဘူးဗြ
မှနျသလား မှားသလား မသိ
ခြိုသလား ခါးသလား မသိ
သငျ့သလား မသငျ့သလား မသိ
တျောသလား ညံ့သလား မသိ
ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလူတှနေဲ့
ဒီခရီးကို ဘယျလိုလုပျပွီး ဆကျကွမလဲဆိုတာ
Author admin 1Posted on December 30, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ရှက်တတ်ရင် ဒီစာကို ဆက်မဖတ်နဲ့…
၁။ ။ ရပ်နေတဲ့နာရီဟာ အချိန်မှန်ကို တနေ့ ၂ခါပြလေ့ရှိတယ်….
၂။ ။ အာရှသားတွေဟာ မျက်လုံး ၂လုံးရှိကြတယ်….
၃။ ။လူတိုင်းဟာ အ၀တ်အစားတွေအောက်မှာ တုံးလုံးတွေကြီးပါပဲ….
၄။ ။သင့် မိဘတွေဟာ အပျို ၊ လူပျို မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး….
၅။ ။ဖိနပ်ကြိုးတိုင်းမှာ အစွန်း ၂ ဖက်စီရှိကြတယ်….
၆။ ။သင်ဟာ January မှာမွေးခဲ့တယ်ဆိုရင် ၁၂ လ ထဲက တစ်လလ မှာ သေရမှာပါ….
၇။ ။ရေသောက်သော သူတိုင်း သေရတာချည်းပဲ…..
၈။ ။ငါးတွေဟာ ရေထဲမှာ မသေတဲ့အထိ အသက်ရှင်နိုင်တယ်တဲ့…..
၉။ ။သင့်မိဘတွေဟာ တစ်ရက်ထဲမှာပဲ မင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်တဲ့….
၁၀။ ။ လူတွေက အမှန်မပြောဘူးဆို လိမ်ပြောကြတယ်….
၁။ ။ ရပျနတေဲ့နာရီဟာ အခြိနျမှနျကို တနေ့ ၂ခါပွလရှေိ့တယျ….
၂။ ။ အာရှသားတှဟော မကျြလုံး ၂လုံးရှိကွတယျ….
၃။ ။လူတိုငျးဟာ အ၀တျအစားတှအေောကျမှာ တုံးလုံးတှကွေီးပါပဲ….
၄။ ။သငျ့ မိဘတှဟော အပြို ၊ လူပြို မဟုတျကွတော့ပါဘူး….
၅။ ။ဖိနပျကွိုးတိုငျးမှာ အစှနျး ၂ ဖကျစီရှိကွတယျ….
၆။ ။သငျဟာ January မှာမှေးခဲ့တယျဆိုရငျ ၁၂ လ ထဲက တဈလလ မှာ သရေမှာပါ….
၇။ ။ရသေောကျသော သူတိုငျး သရေတာခညျြးပဲ…..
၈။ ။ငါးတှဟော ရထေဲမှာ မသတေဲ့အထိ အသကျရှငျနိုငျတယျတဲ့…..
၉။ ။သငျ့မိဘတှဟော တဈရကျထဲမှာပဲ မင်ျဂလာဆောငျကွတယျတဲ့….
၁၀။ ။ လူတှကေ အမှနျမပွောဘူးဆို လိမျပွောကွတယျ….
Author admin 1Posted on December 30, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​လူသိနည်းသော လျို့ဝှက်ချက်များ…..
သင့်ဗိုက်ခေါက် ထူနေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း (၆) ခု
အစားအများကြီးမစားဘဲ ဗိုက်ခေါက်ထူနေရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဗိုက်ခေါက်ကြီးထူပြီး ဗိုက်ပူနေခြင်းဟာ အမျိုးသားတွေရော အမျိုးသမီးတွေမှာပါ မလိုလားတဲ့အရာပါ။ အချို့ဆိုရင် အစားလည်း များများမစားဘဲနဲ့ ဗိုက်ခေါက်ထွက်နေကြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဗိုက်ခေါက်ထူနေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက ၆ ခုကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပြုပြင်လို့ရမယ်ဆိုရင် အချိန်မီပြုပြင်ပြီး ထွက်နေတဲ့ဗိုက်ကို တားဆီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သကြားနဲ့ အချိုဓာတ်ကဲတဲ့ အစားအစာတွေက သင့်ရဲ့ဗိုက်ခေါက်ထူနေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။
အမျိုးသမီးတွေမှာ သွေးဆုံးချိန်ရောက်လာရင်လည်း အလိုလိုနေရင်း ဗိုက်ခေါက်ထူလာတတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် ၄၅ နှစ်မှ ၅၅ နှစ် ဝန်းကျင်မှာ ဓမ္မတာစီးဆင်းမှု ရပ်ဆိုင်းပြီး သွေးဆုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဆီများတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ ဆီကြော်မုန့်တွေကလည်း ဗိုက်မှာအဆီတွေ စုနေစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အာလူးကြော်ကတော့ ဗိုက်ခေါက်ထူစေတဲ့ အဓိက အစားအစာတစ်မျိုးပါပဲ။
မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အရ ဗိုက်ခေါက်ထူကြတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဗိုက်ခေါက်ကလည်း ထူလာဖို့များပါတယ်။
ဘီယာကြိုက်မှတော့ ဘီယာဗိုက်တွေ ဖြစ်ပြီပေါ့။
ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း ထိုင်နေရတာတွေနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းပါးတာတွေဟာ ဗိုက်ခေါက်ထူဖို့ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
အစားအမြားကွီးမစားဘဲ ဗိုကျခေါကျထူနရေတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။
ဗိုကျခေါကျကွီးထူပွီး ဗိုကျပူနခွေငျးဟာ အမြိုးသားတှရေော အမြိုးသမီးတှမှောပါ မလိုလားတဲ့အရာပါ။ အခြို့ဆိုရငျ အစားလညျး မြားမြားမစားဘဲနဲ့ ဗိုကျခေါကျထှကျနကွေတာမြိုးလညျး ရှိပါတယျ။ ဗိုကျခေါကျထူနရေခွငျးရဲ့ အကွောငျးရငျးတှထေဲက ၆ ခုကို ရေးသားလိုကျပါတယျ။ တကယျလို့ ပွုပွငျလို့ရမယျဆိုရငျ အခြိနျမီပွုပွငျပွီး ထှကျနတေဲ့ဗိုကျကို တားဆီးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
သကွားနဲ့ အခြိုဓာတျကဲတဲ့ အစားအစာတှကေ သငျ့ရဲ့ဗိုကျခေါကျထူနရေခွငျးရဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုပါ။
အမြိုးသမီးတှမှော သှေးဆုံးခြိနျရောကျလာရငျလညျး အလိုလိုနရေငျး ဗိုကျခေါကျထူလာတတျပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှဟော အသကျ ၄၅ နှဈမှ ၅၅ နှဈ ဝနျးကငျြမှာ ဓမ်မတာစီးဆငျးမှု ရပျဆိုငျးပွီး သှေးဆုံးလရှေိ့ပါတယျ။
ဆီမြားတဲ့အစားအစာတှနေဲ့ ဆီကွျောမုနျ့တှကေလညျး ဗိုကျမှာအဆီတှေ စုနစေပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အာလူးကွျောကတော့ ဗိုကျခေါကျထူစတေဲ့ အဓိက အစားအစာတဈမြိုးပါပဲ။
မြိုးရိုးစဉျဆကျအရ ဗိုကျခေါကျထူကွတယျဆိုရငျတော့ သငျ့ဗိုကျခေါကျကလညျး ထူလာဖို့မြားပါတယျ။
ဘီယာကွိုကျမှတော့ ဘီယာဗိုကျတှေ ဖွဈပွီပေါ့။
ထမငျးစားပွီးပွီးခငျြး ထိုငျနရေတာတှနေဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု နညျးပါးတာတှဟော ဗိုကျခေါကျထူဖို့ ဖွဈလာစပေါတယျ။
Author admin 1Posted on December 30, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on သင့်ဗိုက်ခေါက် ထူနေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း (၆) ခု
အချစ်ဆိုတာ ချစ်တတ်ရင် မပူပါဘူး
အချစ်က ပူတယ်တဲ့ ပူမှာပေါ့
နားလည်မှူဆိုတဲ့ လက်နှီးနဲ့မှ မကိုင်တာကို။
အချစ်က အရမ်းချစ်လေ ရူံးလေတဲ့
ရူံးမှာပေါ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေက အစွန်းရောက်ပြီး
စိတ်ညစ်ရမှာပေါ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ယုံကြည်မူ မှ
အချစ်ဆိုတာ ဆုံးရူံးခဲ့ကြရရင် နာကျင်ကြေကွဲရတယ်တဲ့
ကြေကွဲရမှာပေါ့ မတည်မြဲတဲ့ သဘောတရား ၊ တွေ့ဆုံကြုံကွဲဆိုတဲ့
ယနေ့ခေတ်မှာ သစ္စာ ဆိုတာ ရှားပါးနေပါပြီတဲ့
သစ္စာ ရှားတာမဟုတ်ပါဘူး သစ္စာ ထက် သာယာမှူ နှင့်
အရမ်းချစ်ပြီးရင် အစွန်းရောက်အောင် မုန်းတတ်ကြသတဲ့
မုန်းမှာပေါ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုချစ်ခဲ့ကြတော့ ဥပေက္ခာတရားကို
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ အဖြူ ရောင်သက်သက်ပါ
အဲ့ဒီအဖြူ ရောင်ကို လူသားတွေက ကိုယ့်အတ္တနဲ့ အရောင်ဆိုးခဲ့ကြတော့
အချစ်က စမ်းရေအစား မီးပင်လယ် ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့။
လေးစားစွာဖြင့် ♥ ♥ ♥
အခဈြဆိုတာ ခဈြတတျရငျ မပူပါဘူး
အခဈြက ပူတယျတဲ့ ပူမှာပေါ့
နားလညျမှူဆိုတဲ့ လကျနှီးနဲ့မှ မကိုငျတာကို။
အခဈြက အရမျးခဈြလေ ရူံးလတေဲ့
ရူံးမှာပေါ့ မြှျောလငျ့ခွငျးတှကေ အစှနျးရောကျပွီး
စိတျညဈရမှာပေါ့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ယုံကွညျမူ မှ
အခဈြဆိုတာ ဆုံးရူံးခဲ့ကွရရငျ နာကငျြကွကှေဲရတယျတဲ့
ကွကှေဲရမှာပေါ့ မတညျမွဲတဲ့ သဘောတရား ၊ တှဆေုံ့ကွုံကှဲဆိုတဲ့
ယနခေ့တျေမှာ သစ်စာ ဆိုတာ ရှားပါးနပေါပွီတဲ့
သစ်စာ ရှားတာမဟုတျပါဘူး သစ်စာ ထကျ သာယာမှူ နှငျ့
အရမျးခဈြပွီးရငျ အစှနျးရောကျအောငျ မုနျးတတျကွသတဲ့
မုနျးမှာပေါ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပိုခဈြခဲ့ကွတော့ ဥပက်ေခာတရားကို
တကယျတော့ အခဈြဆိုတာ အဖွူ ရောငျသကျသကျပါ
အဲ့ဒီအဖွူ ရောငျကို လူသားတှကေ ကိုယျ့အတ်တနဲ့ အရောငျဆိုးခဲ့ကွတော့
အခဈြက စမျးရအေစား မီးပငျလယျ ဖွဈခဲ့ကွတာပေါ့။
လေးစားစှာဖွငျ့ ♥ ♥ ♥
Author admin 1Posted on December 30, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on အချစ်ဆိုတာ ချစ်တတ်ရင် မပူပါဘူး
သိခွင့်ရဖို့ လက်ဖက်ရည်ဖိုးကို အတော်ကုန်ခဲ့ရတယ်
(ဒါတောင် ဆက်ကြည့်တဲ့အခါ သူ့အဖေနဲ့တိုးသေး)
တာမွေကနေ လသာအထိ တကူးတက
ဟိုလူ့ပေါင်းရ ဒီလူ့ကပ်ရနဲ့ အတော်အောက်ကျို့ခဲ့ရတယ်
ထုတ်ကြည့်နိုင်ဖို့ ဓားတောင်ကိုကျော်ပြီး မီးပင်လယ်ကို
သိဖို့ နွေ မိုး ဆောင်း ဥတုသုံးပါးလုံး လုံ့လစိုက်ခဲ့ရတယ်
လမ်းထိပ်ကုန်စုံဆိုင်က ဖုန်းဆီကို အမောတကော
“ရေးပေးပါ” လို စာအုပ်မျိုးကို ရှေ့တော်မှောက်
မှန်းဆတမ်းတရင်း စိတ်ကူးနဲ့ ရူးကာ လွမ်းခဲ့ရတယ်
ကျေးဇူးကြီးလှပါလား Facebook ရယ်…
Facebook ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လာပြောတာ)
တာမှကေနေ လသာအထိ တကူးတက
သိခှငျ့ရဖို့ လကျဖကျရညျဖိုးကို အတျောကုနျခဲ့ရတယျ
(ဒါတောငျ ဆကျကွညျ့တဲ့အခါ သူ့အဖနေဲ့တိုးသေး)
ဟိုလူ့ပေါငျးရ ဒီလူ့ကပျရနဲ့ အတျောအောကျကြို့ခဲ့ရတယျ
ထုတျကွညျ့နိုငျဖို့ ဓားတောငျကိုကြျောပွီး မီးပငျလယျကို
သိဖို့ နှေ မိုး ဆောငျး ဥတုသုံးပါးလုံး လုံ့လစိုကျခဲ့ရတယျ
လမျးထိပျကုနျစုံဆိုငျက ဖုနျးဆီကို အမောတကော
“ရေးပေးပါ” လို စာအုပျမြိုးကို ရှတေ့ျောမှောကျ
မှနျးဆတမျးတရငျး စိတျကူးနဲ့ ရူးကာ လှမျးခဲ့ရတယျ
ကြေးဇူးကွီးလှပါလား Facebook ရယျ…
Facebook ကိုလညျး ကြေးဇူးတငျကွောငျး လာပွောတာ)
Author admin 1Posted on December 30, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on Facebook မပေါ်ခင်က…
ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီမျိုးမှာ “အပူဒဏ်မခံနိုင်သူများ” အတွက် နည်းကောင်းလေးတစ်ခု ပေးချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သောက်နေတဲ့ “ရေနွေးကြမ်း” ပါဘဲ။ မနက်စောစောကတည်းက ရေနွေးကြမ်းကို ကျကျလေးနှပ် ၊ ပြီးရင် လုံးဝ, အေးသွားတဲ့ အထိ အအေးခံထား။ နေ့လည်လောက်ဆို သောက်လို့ရပြီ။ နေ့လည် အပူချိန်တက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရိုးရိုးရေမသောက်ဘဲ အဲဒီ ရေနွေးကြမ်း အအေးကိုသာ သောက်နေ။ တကယ် အပူဒဏ် ခံနိုင်တယ်။
နေပူထဲမှာ ကားမောင်းနေရတဲ့ ဒရိုင်ဘာတွေလည်း မနက်ကတည်းက ဒီလို ရေနွေးကြမ်း အအေးကို ရေသန့်ဗူးလေးနဲ့ (၂)ဗူး (၃)ဗူးလောက် ထည့်ထား။ ရိုးရိုးရေအစား အဲဒါဘဲသောက်ကြည့်။ ခါတိုင်းနေ့တွေလောက် အပူဒဏ်ကို မခံရတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခုသတိထားရမှာတော့ လဘ္ဘက်ခြောက်ကိုတော့ သိပ် အပေါစား အညံ့စားကြီး မသုံးနဲ့ပေါ့ဗျာ။ တော်ကြာ ဆိုးဆေးတွေထပ်ဆိုးပြီး အကြံအဖန်လုပ်ထားတဲ့ လဘ္ဘက်ခြောက် အတုတွေနဲ့ တွေ့သွားပြီး “ဆေးမဖြစ်ဘဲ၊ ဘေးလည်းဖြစ်သွားဦးမယ်”။
အသက်ငယ်သူတွေ ၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းသူတွေတော့ မပြောတတ်ဘူး။ အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူတွေအတွက်တော့ ဒီလောက်ပူပြင်းတဲ့ ရာသီမှာ “ရေခဲရေ” ဟာ သိပ်အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်။
နောက်ထပ် အပူငြိမ်းစေတဲ့ အစားအစာတစ်ခုလည်း တင်ပြချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာ စားစရာ “ထန်းလျှက်” ပါ။ “ထန်းလျှက်” ဟာ အခုလို ပူပြင်းတဲ့ ရာသီမှာ တကယ်စားသင့်တဲ့ အစာတစ်ခုပါ။ ထန်းလျှက်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ သက်စောင့်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ “၀မ်းမီး” ကို အလွန်မှန်စေပါတယ်။ ချိုတာခြင်း တူပေမယ့် “သကြား” “ကြံသကာ” တွေနဲ့ မတူပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ အဖိုးအဖွားတွေ ရှိတုန်းကတော့ နေပူထဲက ပြန်လာရင် ရေမသောက်ခင် ထန်းလျှက် တစ်လုံးနှစ်လုံးကို အရင်စားခိုင်းပြီးမှ ရေသောက်ခိုင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ ထန်းလျှက်ဟာ ကိုယ်တွင်း အပူမီးကို ငြိမ်းစေတာကြောင့် အပူနဲ့ အအေးတွေ့ပြီး ဒုက္ခရောက်တာမျိုး မဖြစ်စေဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အပူလျှပ်ပြီး ဖျားတာမျိုး မဖြစ်စေဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီခေတ်မှာကလည်း ထန်းလျှက်ဆိုတာ ကလေးတွေ မစားကြတော့ဘူးခင်ဗျ။ (ကျွန်တော့် သားသမီးတွေဆို ချော့ကျွေးကျွေး/ခြောက်ကျွေးကျွေး , ကျွေးလို့မရပါဘူး။ သားသမီးကို မိဘ မနိုင်တဲ့ခေတ်)
“ထန်းလျှက်”မှာလည်း အရောင်ဖြူနေတဲ့ ထန်းလျှက်တွေဟာ အာနိသင် သိပ်မရှိဘူး။ အနီရောင်ရင့်ရင့်ရှိတဲ့ ထန်းလျှက်မျိုးမှ အာနိသင် ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတာ့ ဒီလို ထန်းလျှက်မျိုး ရှာလို့ခက်ပါတယ်။ သိမ်ကြီးဈေး တစ်ဝိုက်မှာတော့ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အပူဒဏ်ကို မခံနိုင်သူများ နဲ့ အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်လိုသူများ အတွက် ပို့စ်လေးတစ်ခုပါ။ အပူမကြောက်လည်း မကြောက် ၊ ရေခဲရေလည်း အလွန်ကြိုက်သူများအတွက်တော့ အကျိုးရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
အပူဒဏ်ကြောင့် ချွေးများအရမ်းထွက်ပြီး မောပန်းနွမ်းနယ်မှု များလွန်း နေလျှင် “ဓာတ်ဆား” ရည် သောက်ရန် လိုပါလိမ့်မည်။ ဓာတ်ဆားရည်သည် “၀မ်းသွားမှ သောက်ရန်မဟုတ်ပါ” ။ အပူဒဏ်ကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်း နယ်လွန်းလျှင်လည်း သောက်သင့်ပါသည်။ သွေးတိုးရှိသူများအတွက်တော့ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှသောက်ပါ။ ထန်းလျှက်ကလည်း ဆီးချိုရှိသူများ သင့်တော်မည် မဟုတ်ပါ။ “ရေနွေးကြမ်းအေး” ကတော့ မတည့်သည့်ရောဂါ မရှိသောကြောင့် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မည် ထင်ပါသည်။
Credit – ဒေါက်တာတင်ဗိုလ်ဗိုလ်
အခုလို ပူပွငျးလှတဲ့ နှရောသီမြိုးမှာ “အပူဒဏျမခံနိုငျသူမြား” အတှကျ နညျးကောငျးလေးတဈခု ပေးခငျြပါတယျ
ဒီနညျးလေးကတော့ ကှယျလှနျသှားရှာပွီဖွဈတဲ့ “ဆရာသာဂဒိုး” ရဲ့ နညျးလေးပါ။ ကနျြးမာတဲ့ လူတှအေတှကျတော့ သိပျမသိသာပမေယျ့ မကနျြးမာသူ ၊ အသကျကွီးသူမြားအတှကျတော့ အလှနျသိသာပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ နစေ့ဉျသောကျနတေဲ့ “ရနှေေးကွမျး” ပါဘဲ။ မနကျစောစောကတညျးက ရနှေေးကွမျးကို ကကြလြေးနှပျ ၊ ပွီးရငျ လုံးဝ, အေးသှားတဲ့ အထိ အအေးခံထား။ နလေ့ညျလောကျဆို သောကျလို့ရပွီ။ နလေ့ညျ အပူခြိနျတကျနတေဲ့ အခြိနျမှာ ရိုးရိုးရမေသောကျဘဲ အဲဒီ ရနှေေးကွမျး အအေးကိုသာ သောကျနေ။ တကယျ အပူဒဏျ ခံနိုငျတယျ။
နပေူထဲမှာ ကားမောငျးနရေတဲ့ ဒရိုငျဘာတှလေညျး မနကျကတညျးက ဒီလို ရနှေေးကွမျး အအေးကို ရသေနျ့ဗူးလေးနဲ့ (၂)ဗူး (၃)ဗူးလောကျ ထညျ့ထား။ ရိုးရိုးရအေစား အဲဒါဘဲသောကျကွညျ့။ ခါတိုငျးနတှေ့လေောကျ အပူဒဏျကို မခံရတာ သတိထားမိပါလိမျ့မယျ။
တဈခုသတိထားရမှာတော့ လဘျဘကျခွောကျကိုတော့ သိပျ အပေါစား အညံ့စားကွီး မသုံးနဲ့ပေါ့ဗြာ။ တျောကွာ ဆိုးဆေးတှထေပျဆိုးပွီး အကွံအဖနျလုပျထားတဲ့ လဘျဘကျခွောကျ အတုတှနေဲ့ တှသှေ့ားပွီး “ဆေးမဖွဈဘဲ၊ ဘေးလညျးဖွဈသှားဦးမယျ”။
ဒီရာသီမှာ လုံးလုံးရှောငျသငျ့တာကတော့ “ရခေဲရေ” ပါဘဲ။ သောကျလိုကျတဲ့ ခဏတော့ အေးသှားသလို ရှိပမေယျ့ နောကျပိုငျး ရငျတှပေူလာ၊ ရပေို ငတျလာ ၊ အဆငျမသငျ့ရငျ ဆီးဝမျးပါခြုပျပွီး ၊ ဆီးပူဆီးအောငျ့ပါ ဖွဈလာမယျ။ လညျခြောငျးတှေ နာလာမယျ။ အာသီးတှေ ရောငျလာမယျ။ ခြောငျးတှေ ဆိုးလာမယျ။ မကျြစတှေ့ေ ဝေလာမယျ။
အသကျငယျသူတှေ ၊ ကနျြးမာရေး ကောငျးသူတှတေော့ မပွောတတျဘူး။ အသကျကွီးသူတှနေဲ့ ကနျြးမာရေး မကောငျးသူတှအေတှကျတော့ ဒီလောကျပူပွငျးတဲ့ ရာသီမှာ “ရခေဲရေ” ဟာ သိပျအန်တရာယျ ကွီးပါတယျ။
နောကျထပျ အပူငွိမျးစတေဲ့ အစားအစာတဈခုလညျး တငျပွခငျြပါသေးတယျ။ အဲဒါကတော့ မွနျမာ့ရိုးရာ စားစရာ “ထနျးလြှကျ” ပါ။ “ထနျးလြှကျ” ဟာ အခုလို ပူပွငျးတဲ့ ရာသီမှာ တကယျစားသငျ့တဲ့ အစာတဈခုပါ။ ထနျးလြှကျဟာ ကိုယျခန်ဓာရဲ့ သကျစောငျ့ဓာတျဖွဈတဲ့ “၀မျးမီး” ကို အလှနျမှနျစပေါတယျ။ ခြိုတာခွငျး တူပမေယျ့ “သကွား” “ကွံသကာ” တှနေဲ့ မတူပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ အဖိုးအဖှားတှေ ရှိတုနျးကတော့ နပေူထဲက ပွနျလာရငျ ရမေသောကျခငျ ထနျးလြှကျ တဈလုံးနှဈလုံးကို အရငျစားခိုငျးပွီးမှ ရသေောကျခိုငျးလေ့ ရှိပါတယျ။ ထနျးလြှကျဟာ ကိုယျတှငျး အပူမီးကို ငွိမျးစတောကွောငျ့ အပူနဲ့ အအေးတှပွေီ့း ဒုက်ခရောကျတာမြိုး မဖွဈစဘေူးလို့ ဆိုပါတယျ။ အပူလြှပျပွီး ဖြားတာမြိုး မဖွဈစဘေူးလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီခတျေမှာကလညျး ထနျးလြှကျဆိုတာ ကလေးတှေ မစားကွတော့ဘူးခငျဗြ။ (ကြှနျတေျာ့ သားသမီးတှဆေို ခြော့ကြှေးကြှေး/ခွောကျကြှေးကြှေး , ကြှေးလို့မရပါဘူး။ သားသမီးကို မိဘ မနိုငျတဲ့ခတျေ)
“ထနျးလြှကျ”မှာလညျး အရောငျဖွူနတေဲ့ ထနျးလြှကျတှဟော အာနိသငျ သိပျမရှိဘူး။ အနီရောငျရငျ့ရငျ့ရှိတဲ့ ထနျးလြှကျမြိုးမှ အာနိသငျ ရှိပါတယျ။ ရနျကုနျမှာတာ့ ဒီလို ထနျးလြှကျမြိုး ရှာလို့ခကျပါတယျ။ သိမျကွီးဈေး တဈဝိုကျမှာတော့ ရှိတတျပါတယျ။
ဒါကတော့ အပူဒဏျကို မခံနိုငျသူမြား နဲ့ အပူဒဏျကို ကာကှယျလိုသူမြား အတှကျ ပို့ဈလေးတဈခုပါ။ အပူမကွောကျလညျး မကွောကျ ၊ ရခေဲရလေညျး အလှနျကွိုကျသူမြားအတှကျတော့ အကြိုးရှိမညျ မဟုတျပါ။ ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစေ။
အပူဒဏျကွောငျ့ ခြှေးမြားအရမျးထှကျပွီး မောပနျးနှမျးနယျမှု မြားလှနျး နလြှေငျ “ဓာတျဆား” ရညျ သောကျရနျ လိုပါလိမျ့မညျ။ ဓာတျဆားရညျသညျ “၀မျးသှားမှ သောကျရနျမဟုတျပါ” ။ အပူဒဏျကွောငျ့ ပငျပနျးနှမျး နယျလှနျးလြှငျလညျး သောကျသငျ့ပါသညျ။ သှေးတိုးရှိသူမြားအတှကျတော့ ဆရာဝနျနှငျ့ တိုငျပငျပွီးမှသောကျပါ။ ထနျးလြှကျကလညျး ဆီးခြိုရှိသူမြား သငျ့တျောမညျ မဟုတျပါ။ “ရနှေေးကွမျးအေး” ကတော့ မတညျ့သညျ့ရောဂါ မရှိသောကွောငျ့ အကောငျးဆုံး ဖွဈမညျ ထငျပါသညျ။
Credit – ဒေါကျတာတငျဗိုလျဗိုလျ
Author admin 1Posted on December 30, 2017 December 30, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီမျိုးမှာ “အပူဒဏ်မခံနိုင်သူများ” အတွက် နည်းကောင်းလေးတစ်ခု ပေးချင်ပါတယ်
​ဆံပင်ကျွတ်တာရပ်ပြီး အမြန်ဆုံး အရှည်မြန်စေဖို့ ဘီယာပါဝင်တဲ့ ဆံပင်ပေါင်းဆေးကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဘီယာဆိုတာ ဆံပင်ကျွတ်တာကို အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်စေပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား ပျမ်းမျှ လူဦးရေ ၁ သိန်းကနေ ၁ သိန်းခွဲကြားဟာ ဆံပင်ကျွတ်တဲ့ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်တာကို အမြန်ဆုံး ကုစားပြီး ဆံပင်အရှည်မြန်စေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘီယာ ခွက် ၁ ၀က်
ပျားရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ကြက်ဥအနှစ် ၁ လုံး
ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုရောပြီး သေချာမွှေပေးပါ။ ထူထူပျစ်ပျစ်လေး ဖြစ်လာတဲ့ထိ မွှေပေးရပါမယ်။
ပြီးရင် ဦးရေပြားနဲ့ ဆံပင်တွေပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။ ၂ နာရီလောက် ထားပါ။ ပူလာပြီလို့ ခံစားရရင် ကောင်းပါတယ်။ ဆံပင်ပေါက်တဲ့ Follicle လေးတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးနေတာပါ။ ပြီးရင် ခေါင်းလျှော်ချနိုင်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး ၁ ကြိမ်လောက်လုပ်ပါ။ ၁ လလောက်ဆို သိသာလာပါလိမ့်မယ်။
ဆံပငျကြှတျတာရပျပွီး အမွနျဆုံး အရှညျမွနျစဖေို့ ဘီယာပါဝငျတဲ့ ဆံပငျပေါငျးဆေးကို ဘယျလိုလုပျမလဲ
ဘီယာဆိုတာ ဆံပငျကြှတျတာကို အမွနျဆုံး ရပျတနျ့စပေါတယျ။ အရှယျရောကျပွီးသား ပမျြးမြှ လူဦးရေ ၁ သိနျးကနေ ၁ သိနျးခှဲကွားဟာ ဆံပငျကြှတျတဲ့ပွဿနာကို ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဆံပငျကြှတျတာကို အမွနျဆုံး ကုစားပွီး ဆံပငျအရှညျမွနျစဖေို့ နညျးလမျးကောငျးကို မြှဝေပေးလိုကျပါတယျ။
ဘီယာ ခှကျ ၁ ၀ကျ
ကွကျဥအနှဈ ၁ လုံး
ပါဝငျပစ်စညျးအားလုံးကိုရောပွီး သခြောမှပေေးပါ။ ထူထူပဈြပဈြလေး ဖွဈလာတဲ့ထိ မှပေေးရပါမယျ။
ပွီးရငျ ဦးရပွေားနဲ့ ဆံပငျတှပေျေါမှာ လိမျးပေးပါ။ ၂ နာရီလောကျ ထားပါ။ ပူလာပွီလို့ ခံစားရရငျ ကောငျးပါတယျ။ ဆံပငျပေါကျတဲ့ Follicle လေးတှကေို လှုံ့ဆျောပေးနတောပါ။ ပွီးရငျ ခေါငျးလြှျောခနြိုငျပါတယျ။
တဈပတျကို အနညျးဆုံး ၁ ကွိမျလောကျလုပျပါ။ ၁ လလောကျဆို သိသာလာပါလိမျ့မယျ။
Author admin 1Posted on December 30, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ဆံပင်ကျွတ်တာရပ်ပြီး အမြန်ဆုံး အရှည်မြန်စေဖို့ ဘီယာပါဝင်တဲ့ ဆံပင်ပေါင်းဆေးကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဆံပင်ဆိုတာ လူသားတိုင်းရဲ့ခေါင်းထက်မှာနေတာဆိုတော့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဆံပင်အနည်းအများနဲ့ ဆံပင်ပုံစံဟာ မျက်နှာကိုလည်း အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆံပင်တွေကျွတ်ပြီး ထိပ်ပြောင်ချင်နေတဲ့ လူတွေအတွက် သဘာဝအတိုင်း ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေတဲ့ ဆေးမြီးတိုလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းက ထိပ်ပြောင်ချင်နေတဲ့ ကိုကိုတို့အတွက် ဆံပင်ပြန်ပေါက်လာစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အကျိုးအာနိသင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်တော့ ဆီတွေ၊ ဆေးမြီးတိုတွေနဲ့ နှိပ်ပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဦးရေပြားဆဲလ်တွေကို နှိုးဆွပေးပြီး ဆံသားပြန်လည်ထူထပ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မိမိရဲ့ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးဖို့အတွက် အချိန်တစ်ခုပေးခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိတ်တင်းကြပ်မှုကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ အဓိကကတော့ နှိပ်နယ်ပေးခြင်းမှာ ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ ဖိအားတွေက ဆံပင်ပြန်ပေါက်စေဖို့နဲ့ ဆံသားပြန်လည်ထူထပ်လာစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို ဆံပင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ အသုံးပြုနေတာကြာပါပြီ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဟာ ဆံပင်လျော့နည်းခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရုံသာမက ဦးရေပြားကိုလည်း ချောမွေ့စေပါတယ်။ ဒါတင်မက ရှားစောင်းလက်ပတ်က ဗောက်ပျောက်စေပြီး အဆီပိုတွေကြောင့် ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ဆံပင်မွှေးညှင်းပေါက်လေးတွေကိုလည်း ပြန်ပွင့်စေပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်လ်ကို လက်ဝါးထဲထည့်ပြီး ဦးရေပြားနဲ့ ဆံပင်ပေါ်မှာ တစ်ပတ်ကို (၃) (၄) ကြိမ်လောက် လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါဝင်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေ၊ ပေါင်းဆေးတွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အုန်းဆီမှာပါဝင်တဲ့ ဖက်တီအက်ဆစ်တွေကတော့ ဦးရေပြားအပေါ်ယံလွှာကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ဆံပင်တွေရဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အုန်းဆီကို ဆံသားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ခေါင်းမလျှော်ခင်နဲ့ ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အုန်းဆီကို လက်ဝါးနဲ့ထည့်ပြီး ဦးရေပြားပေါ်မှာ အရင်လိမ်းပေးပါ။ ပြီးရင် နှိပ်နယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ရပါပြီ။ အုန်းဆီကို ဆံပင်အုံထူအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးမြီးတိုတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတာက ဆံသားကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ပြီး ဆံပင်လေး နူးညံ့တောက်ပြောင်နေအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်လို့ပါပဲ။ ဒီဆေးမြီးတိုကို အရင်ကတည်းက ဂျဲလ်တွေ၊ wax တွေအစား ဆံပင်အလှကုန်တစ်မျိုးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ။
အိုမီဂါ ဖက်တီအက်ဆစ်ကို မှီဝဲခြင်းက သင့်ရဲ့ဆံပင်ကို အတွင်းပိုင်းမှ ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ထဲမှာ အာဟာရဓာတ်တွေ၊ ပရိုတိန်းဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ငါးကြီးဆီကို အားဆေးတစ်မျိုးအဖြစ်သာမက ဆံသားထူထပ်လာအောင်၊ ပိုမိုရှည်လျားလာအောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အိုမီဂါအားဖြည့်ဓာတ်တစ်မျိုးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အိုမီဂါဖက်တီအက်ဆစ်တွေက ဦးရေပြားဆဲလ်တွေကို ထောက်ကူပေးနိုင်သလို ခုခံအားကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးတဲ့အတွက် ဆံသားကျန်းမာရေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ဂျင်ဆင်းအားဆေး သောက်သုံးပေးခြင်းကလည်း ဆံပင်မွှေးညှင်းပေါက်လေးတွေကို နှိုးဆွပေးပြီး ဆံပင်တွေကို ပြန်လည်သန်စွမ်းလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဂျင်ဆင်းဆေးမြစ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေအတွက်သာမက ဆံသားအတွက်လည်း ကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
ကြက်သွန်နီနံ့ကို ခံနိုင်တယ်ဆိုရင် ပြန်ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ တော်တော်များပါတယ်။ ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပြီး သစ်သီးဖျော်စက်ထဲမှာ ထည့်မွှေပြီးမှ အရည်ပြန်ညှစ်လိုက်လို့ရတဲ့ အရည်ဟာ ကြက်သွန်နီဖျော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီဖျော်ရည်ဟာ ဆံသားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထောက်ကူအားပေးနိုင်သလို သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ကြက်သွန်နီကိုကြိတ်ပြီး ညှစ်လိုက်လို့ရတဲ့ ကြက်သွန်နီဖျော်ရည်နဲ့ ဦးရေပြားနဲ့ ဆံပင်ပေါ်မှာလိမ်းပေးပြီး (၁၅) မိနစ်လောက် ထားပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ပြန်လျှော်ပေးလိုက်ပါ။
သံပုရာသီးကို ညှစ်လို့ရတဲ့ သံပုရာရည်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သံပုရာဆီကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (၂) မျိုးလုံးက ဆံသားအရည်အသွေးနဲ့အရေအတွက်ကို များပြားစေတယ်လို့ အဆိုရှိလို့ပါပဲ။ သံပုရာအဆီဟာဆိုရင် သင့်ရဲ့ဦးရေပြားလေးကို ကျန်းမာနေစေပြီး ဆံပင်ကိုလည်း သန်စွမ်းထူထဲစေပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သံပုရာရည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ဦးရေပြားနဲ့ ဆံသားပေါ်မှာ လိမ်းပေးပြီး (၁၅) မိနစ်လောက်ထားပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်ပါ။
ဆံပငျဆိုတာ လူသားတိုငျးရဲ့ခေါငျးထကျမှာနတောဆိုတော့ အလှနျအရေးကွီးတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုပါပဲ။ ဆံပငျအနညျးအမြားနဲ့ ဆံပငျပုံစံဟာ မကျြနှာကိုလညျး အမြားကွီးအကြိုးသကျရောကျမှုရှိပါတယျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဆံပငျတှကြှေတျပွီး ထိပျပွောငျခငျြနတေဲ့ လူတှအေတှကျ သဘာဝအတိုငျး ဆံပငျပွနျပေါကျစတေဲ့ ဆေးမွီးတိုလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ဦးရပွေားကို နှိပျနယျပေးခွငျးက ထိပျပွောငျခငျြနတေဲ့ ကိုကိုတို့အတှကျ ဆံပငျပွနျပေါကျလာစဖေို့ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ အကြိုးအာနိသငျ ပိုမိုကောငျးမှနျစဖေို့အတှကျတော့ ဆီတှေ၊ ဆေးမွီးတိုတှနေဲ့ နှိပျပေးတာ ပိုကောငျးပါတယျ။ ဒီလိုလုပျပေးခွငျးဖွငျ့ ဦးရပွေားဆဲလျတှကေို နှိုးဆှပေးပွီး ဆံသားပွနျလညျထူထပျလာစနေိုငျပါတယျ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး မိမိရဲ့ဦးရပွေားကို နှိပျနယျပေးဖို့အတှကျ အခြိနျတဈခုပေးခွငျးက စိတျဖိစီးမှုနဲ့ စိတျတငျးကွပျမှုကိုလညျး လြော့ကစြပေါတယျ။ အဓိကကတော့ နှိပျနယျပေးခွငျးမှာ ထညျ့သှငျးလိုကျတဲ့ ဖိအားတှကေ ဆံပငျပွနျပေါကျစဖေို့နဲ့ ဆံသားပွနျလညျထူထပျလာစဖေို့ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
ရှားစောငျးလကျပတျကို ဆံပငျနဲ့ဆိုငျတဲ့ ထုတျကုနျပစ်စညျးတှမှော အသုံးပွုနတောကွာပါပွီ။ ရှားစောငျးလကျပတျဟာ ဆံပငျလြော့နညျးခွငျးပွဿနာကို ဖွရှေငျးပေးနိုငျရုံသာမက ဦးရပွေားကိုလညျး ခြောမှစေ့ပေါတယျ။ ဒါတငျမက ရှားစောငျးလကျပတျက ဗောကျပြောကျစပွေီး အဆီပိုတှကွေောငျ့ ပိတျဆို့နတေဲ့ ဆံပငျမှေးညှငျးပေါကျလေးတှကေိုလညျး ပွနျပှငျ့စပေါတယျ။ ရှားစောငျးလကျပတျဂယျြလျကို လကျဝါးထဲထညျ့ပွီး ဦးရပွေားနဲ့ ဆံပငျပျေါမှာ တဈပတျကို (၃) (၄) ကွိမျလောကျ လိမျးပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ ရှားစောငျးလကျပတျပါဝငျတဲ့ ခေါငျးလြှျောရညျတှေ၊ ပေါငျးဆေးတှကေိုလညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
အုနျးဆီမှာပါဝငျတဲ့ ဖကျတီအကျဆဈတှကေတော့ ဦးရပွေားအပျေါယံလှာကို ထိုးဖောကျဝငျရောကျနိုငျပွီး ဆံပငျတှရေဲ့ ပရိုတိနျးဓာတျဆုံးရှုံးခွငျးကိုလညျး လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။ အုနျးဆီကို ဆံသားအခွအေနပေျေါမူတညျပွီး ခေါငျးမလြှျောခငျနဲ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အုနျးဆီကို လကျဝါးနဲ့ထညျ့ပွီး ဦးရပွေားပျေါမှာ အရငျလိမျးပေးပါ။ ပွီးရငျ နှိပျနယျပေးလိုကျမယျဆိုရငျ ရပါပွီ။ အုနျးဆီကို ဆံပငျအုံထူအောငျလုပျပေးနိုငျတဲ့ ဆေးမွီးတိုတဈခုအဖွဈ အသိအမှတျပွုထားတာက ဆံသားကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးမှနျပွီး ဆံပငျလေး နူးညံ့တောကျပွောငျနအေောငျ စှမျးဆောငျနိုငျလို့ပါပဲ။ ဒီဆေးမွီးတိုကို အရငျကတညျးက ဂြဲလျတှေ၊ wax တှအေစား ဆံပငျအလှကုနျတဈမြိုးအဖွဈ အသုံးပွုခဲ့ကွတာပါ။
အိုမီဂါ ဖကျတီအကျဆဈကို မှီဝဲခွငျးက သငျ့ရဲ့ဆံပငျကို အတှငျးပိုငျးမှ ဖှံ့ဖွိုးလာအောငျ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ထဲမှာ အာဟာရဓာတျတှေ၊ ပရိုတိနျးဓာတျတှေ ကွှယျဝစှာပါဝငျလို့ပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ငါးကွီးဆီကို အားဆေးတဈမြိုးအဖွဈသာမက ဆံသားထူထပျလာအောငျ၊ ပိုမိုရှညျလြားလာအောငျ ကူညီပေးနိုငျတဲ့ အိုမီဂါအားဖွညျ့ဓာတျတဈမြိုးအဖွဈလညျး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အိုမီဂါဖကျတီအကျဆဈတှကေ ဦးရပွေားဆဲလျတှကေို ထောကျကူပေးနိုငျသလို ခုခံအားကိုလညျးမွှငျ့တငျပေးတဲ့အတှကျ ဆံသားကနျြးမာရေးကိုလညျး ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ဂငျြဆငျးအားဆေး သောကျသုံးပေးခွငျးကလညျး ဆံပငျမှေးညှငျးပေါကျလေးတှကေို နှိုးဆှပေးပွီး ဆံပငျတှကေို ပွနျလညျသနျစှမျးလာစနေိုငျပါတယျ။ ဂငျြဆငျးဆေးမွဈထဲမှာပါဝငျတဲ့ဓာတျတှဟော လူ့ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှအေတှကျသာမက ဆံသားအတှကျလညျး ကောငျးမှနျတယျလို့ဆိုကွပါတယျ။
ကွကျသှနျနီနံ့ကို ခံနိုငျတယျဆိုရငျ ပွနျရရှိမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေတော့ တျောတျောမြားပါတယျ။ ကွကျသှနျနီကို အခှံခှာပွီး သဈသီးဖြျောစကျထဲမှာ ထညျ့မှပွေီးမှ အရညျပွနျညှဈလိုကျလို့ရတဲ့ အရညျဟာ ကွကျသှနျနီဖြျောရညျဖွဈပါတယျ။ ကွကျသှနျနီဖြျောရညျဟာ ဆံသားဖှံ့ဖွိုးမှုကို ထောကျကူအားပေးနိုငျသလို သှေးလှညျ့ပတျမှုကိုလညျး ကောငျးမှနျစပေါတယျ။ ကွကျသှနျနီကိုကွိတျပွီး ညှဈလိုကျလို့ရတဲ့ ကွကျသှနျနီဖြျောရညျနဲ့ ဦးရပွေားနဲ့ ဆံပငျပျေါမှာလိမျးပေးပွီး (၁၅) မိနဈလောကျ ထားပေးလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ ခေါငျးလြှျောရညျနဲ့ ပွနျလြှျောပေးလိုကျပါ။
သံပုရာသီးကို ညှဈလို့ရတဲ့ သံပုရာရညျကိုပဲဖွဈဖွဈ၊ သံပုရာဆီကိုပဲဖွဈဖွဈ သုံးနိုငျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ (၂) မြိုးလုံးက ဆံသားအရညျအသှေးနဲ့အရအေတှကျကို မြားပွားစတေယျလို့ အဆိုရှိလို့ပါပဲ။ သံပုရာအဆီဟာဆိုရငျ သငျ့ရဲ့ဦးရပွေားလေးကို ကနျြးမာနစေပွေီး ဆံပငျကိုလညျး သနျစှမျးထူထဲစပေါတယျ။ ဒါမှမဟုတျရငျလညျး သံပုရာရညျ လတျလတျဆတျဆတျကို ဦးရပွေားနဲ့ ဆံသားပျေါမှာ လိမျးပေးပွီး (၁၅) မိနဈလောကျထားပေးပါ။ ပွီးရငျတော့ ခေါငျးလြှျောပေးလိုကျပါ။
Author admin 1Posted on December 30, 2017 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​သဘာဝအတိုင်း ဆံပင်ပြန်ပေါက်နည်း
​သင့်ချစ်သူ သင့်ဇနီးထံမှာ ဒီအချက် ၈ ချက် ရှိနေရင် သင်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်
​မိဘမဲ့ကျောင်းများသို့ ပေးကမ်းလှူတမ်းမယ့်သူများ ဒီပို့လေးကို ကြည့်သွားကြပါလို့ ရင်နင့်စွာနဲ့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
​မျိုးဆက်လေးဆက် ၅ကြိမ်ဆက်တိုက် ဆယ်တန်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးပထမနေရာကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသူများ
myanmar news Proudly powered by WordPress